Councillor Andrew Ellwood - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in items 7 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Barbara Miller - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in items 7 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Bob Collis - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in items 7 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor David Ellis - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in items 7 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Jim Creamer - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in items 7 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor John Parr - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in items 7 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor John Truscott - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in items 7 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Marje Paling - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in items 7 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Meredith Lawrence - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in items 7 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Mike Hope - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in items 7 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Pat Bosworth - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in items 7 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Paul Wilkinson - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in items 7 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Rachael Ellis - Non Pecuniary - Declared a non-pecuniary interest in item 7 on the agenda as a member of the Warren Action Group.
Councillor Rachael Ellis - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in items 7 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Ron McCrossen - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in items 7 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Rosa Keneally - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in items 7 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Sam Smith - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in items 7 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Andrew Ellwood - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in item 8 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Barbara Miller - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in item 8 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Bob Collis - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in item 8 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor David Ellis - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in item 8 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Henry Wheeler - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in item 8 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Jim Creamer - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in item 8 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor John Parr - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in item 8 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor John Truscott - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in item 8 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Marje Paling - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in item 8 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Meredith Lawrence - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in item 8 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Mike Hope - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in item 8 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Pat Bosworth - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in item 8 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Paul Wilkinson - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in item 8 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Rachael Ellis - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in item 8 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Ron McCrossen - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in item 8 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Rosa Keneally - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in item 8 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.
Councillor Sam Smith - Non Pecuniary - The Chair declared a collective non-pecuniary interest in item 8 on the agenda as the land was in the ownership of Gedling Borough Council.